विचार Archives - Page 18 of 22 - News Today
किन जन्मन्छन् सीके राउतहरु ? : जनजाति आन्दोलनमा पनि ‘राउतहरु’ जन्मने खतरा
खिम घले पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा डा. सीके राउत चर्चाको विषय बनेको छ । कोही उनले मुलुकलाई बिखण्डनको ...
खिम घले पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा डा. सीके राउत चर्चाको विषय बनेको छ । कोही उनले मुलुकलाई बिखण्डनको दिशामा लान लागको भन्दै सख्त कारवाहीको माग गर्छन् । कोही उनले उठाएका मुद्दाहरु मधेसी जनताको असन् ...